रातभरि कालिकोटमा प्रहरी सर्च, विप्लवको हेडक्वार्टर र सडक निर्माणमा रोक, अब के होला ? – जलजला अनलाइन
Posted on March 13, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on रातभरि कालिकोटमा प्रहरी सर्च, विप्लवको हेडक्वार्टर र सडक निर्माणमा रोक, अब के होला ?
फागुन २९, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको गृह जिल्ला कालिकोट सुरक्षा दृष्टिले निकै ‘संवेदनशील’ बनेको छ।
विश्वकर्माको घर नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नं. ६ मालकोट हो। उनले मालकोटमा ‘चुनौतीपूर्ण प्रभाव’ विस्तार गरेका छन्। विश्वकर्माको अगुवाइमा मालकोटमा २१०० वर्गफिटको सहिद स्मृति भवन र पार्टी हेडक्वार्टर कार्यालय बनाउन थालिएको छ।
‘हामीले सबै समूहलाई वार्तामा ल्यायौं, तर विप्लव माओवादीलाई ल्याउन सकेनौं, यो माओवादीको विषय राजनीतिक संवादबाटै गर्नुपर्छ भनी सरकारलाई राय–प्रतिवेदन दिएका थियौं,’ पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने। -सेतोपाटीबात साभार
दाङबाट काठमाडौं हिडेको स्कारपियो गाडी दुर्घटना, ५ जना घाइते
Posted on May 7, 2018 Author Jaljala Online
बैशाख २४, काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासन सवार स्कार्पियो धादिङमा दुर्घटना हुँदा पाँच जना घाईते भएका छन् । उक्त दुर्घटनामा परि घोराही पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष देवीबहादुर डिसी, सचिव सुमन शर्मा, कोषाध्यक्ष धुर्व केसी र नेकपा एमालेका सचिवालय सदस्य बिवेश श्रेष्ठ घाइते भएका छन् । घाइतेमध्य सबैभन्दा बढी चोट […]
१००० किलो बम खसालेको स्थानको स्थलगत भ्रमण गर्दा देखियो यस्तो चमत्कार
Posted on March 1, 2019 March 1, 2019 Author Jaljala Online
असद हाशिम, अल जजिरा । यो हप्ताको प्रारम्भतिर भारतले पाकिस्तानी भूभागभित्रै हवाई रेड गर्यो । सो रेडमा १००० किलो बम खसालिएको भारतीय सेनाले दाबी गर्यो । हवाई रेडमा खसालिएका धेरै जसो वनक्षेत्र र एक किसानको खेतमा खसेको पाइएको छ । तथापी बम हानिएको स्थान नजिक एक धार्मिक विद्यालय(मद्रसा) भेटिएको छ । जैश–ए–मोहम्मदको सम्बन्धन देखिने मद्रसामा […]